Markaad dooranayso PIN, dooro afar lambar oo si fudud aad u xasuusan karto laakiin ay adag tahay in qof kale ogaado (tusaale ahaan, dhalashada ilmahaaga ama waalidka) HA U ISTICMAAL nambar isku mid ah, sida 1111, ama tirooyin isku xigxiga, sida 1234, lambarkaaga PIN.
HA siinin PIN-kaaga qof kale oo aan ka ahayn wakiil WIC oo tababbaran. Haddii qof garanayo lambarkaaga PIN oo uu u adeegsado kaarkaaga inuu ku helo dheefahaaga cuntada adiga oo aan ogolaansho lagaa helin, gargaarkaas lama beddelayo.
Isla markiiba la xiriir rugtaada caafimaadka. Waxaad heli kartaa kaarka beddelka shan (5) maalmood ka dib markii kaarka la soo sheegay la waayey ama la xaday.
Khasnajiga ayaa baaraya alaabada si loo xaqiijiyo inay yihiin WIC la ogolaaday oo ay ku jiraan macaashka qoyskaaga.
Had iyo jeer hayso rasiidka dheelitirkaaga. Waxay muujineysaa cunnooyinka la heli karo ee qoyskaaga iyo maalinta ugu dambeysa ee lagu bixiyo dheefahaaga hadda.